Hobyo Maanta wey Camiran Tahay? | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Hobyo Maanta wey Camiran Tahay
Magalada Hobyo oo ah isha dhaqalaha Galmudug ayaa saacdihii ugu dambeyay waxaa gaarayay wafduud kala duwan oo kala yimid Gudaha dalka iyo dibadiisa kuwasi oo ka qeyb galaya Xaflada guusha dhismaha Wadada Gob oo dhawaan La gaarsiyay magaalada saaran badweynta hindiya ee Hobyo.
Hobyo ayaa hadda waxaa ay noqotay magaalo kale oo cusub madama wadooyin iyo dib u dhis xoogan lagu sameyay xarumo badan oo ku yaalla magaladasi.
Sheekada xiisaha leh ayaa waxaa ay tahay in dadkii ku dhashay Hobyo islamarkana joogay ay kala garan wayeen guryaha qaarkood madama bacaadkii xiray guryaha iyo xarumaha kale laga qaaday oo hadda ay noqotay meel leh wadooyin soo saaray quruxda magalada Hobyo.
Rer Hobyo ayaa 48 saac ee ugu dambeysay waxa ay heegan culus u galeen sidii ay u soo dhaweyn lahayeen wafduuda gaareysa Halkaasi waxaana la sameyay goobo qurxoon oo loogu tala Galay in martida imaaneysa ay ku nastaan ama sawiro xasuus ah ay ku galaan.
Dhalinyaro reer Gaalkacyo oo xalay ka ambabaxay Gaalkacyo ayaa dhankoda ku biiray hagaajinta goobaha la filayo iney madaxda tagaan iyo madasha xaflada lagu qabanayo.
Hobyo ayaa waxaa la filayaa in ay gaaraan madax sare sare oo ka tirsan dowlada soomaliya iyo Maamulka Galmudug si ay uga qeyb galaan xaflada rajadii ruwoday.
Magaalada Hobyo maanta waa meel buuxda oo camiran shacabkane ay ka doodayaan sidii looga qeyb qaadan laha dhismaha dakada Hobyo.